Cook Anozivisa Yekutanga Kutaura Uchishandisa Animoji | Ndinobva mac
Cook Anozivisa Yekutanga Kutaura Uchishandisa Animoji
Zvaifanira kuitika. Neyeuchidzo yenyaya yekupedza kudzidza hurukuro yakapihwa naSteve Jobs kuStanford University ichiri mu retina, Tim Cook akazivisa hurukuro yakafanana paUniversity yake pakupedza gore rino.
Nekudaro, kuziviswa kweiyi kutaura, kunozoitika kuDuke University, uko kwakafunda Cook, yakaitwa munzira yekuvandudza zvachose, ichinongedzera kunhau dzichangoburwa dzakapihwa nekambani yeCupertino-based. Unogona kuona vhidhiyo pazasi:
Sezvauri kuona, nerubatsiro rwevadzidzi uye mapurofesa eiyo Yunivhesiti, uye kunyangwe mutungamiri wayo, Vincent Price, Tim Cook anozivisa huvepo hwake pakupedza gore rino, muna Chivabvu 13, neimwe nzira yakasarudzika, kushandisa Animojis ane mukurumbira ari kuitwa neiyo itsva iPhone X. Vhidhiyo haina kutambiswa. Sekuona kwedu, kumwe kushandiswa kweaya anoshamisa masimba emojis.
Kufanana nemazita ake makore akati wandei apfuura, Cook anotarisira kudzikira munhoroondo ichitsanangura hurukuro yakakurudzira mafungu evadzidzi kuyambuka nyika dzakabatana uye kutenderera pasirese kwezvizvarwa. Kunyangwe Cook achiri nemwedzi yakawanda pamberi pake yekugadzirira hurukuro yake, hapana munhu anofungidzira kukosha kwazvichave nazvo, saka basa rekuchengetera uye hurukuro izere neruzivo inotarisirwa, kuratidza izvo izvo CEO weApple yaanoda kupa kune yanhasi nzanga. Ichokwadi kuva zuva renhoroondo.
Cook achatarisana, makore makumi matatu gare gare, kwaakaenda kuyunivhesiti kwake paakanga achiri mudzidzi. Kubva ini Ndiri Kubva kuMac isu tinotarisira kuzuva rino uye izvo Cook anoreva kwatiri mumusangano iyo, isu tine chokwadi, ichave yakakosha zuva reApple muna 2018. Tinogona kungomirira. Yakanyorwa pakarenda yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Cook Anozivisa Yekutanga Kutaura Uchishandisa Animoji
Discography yaDef Leppard yave kuwanikwa paApple Music
Iyi inogona kuve iri vhiki yakakosha yeApple's HomePod